आजको राशिफल असार २३ गते बुधबारGandaki Press
आजको राशिफल असार २३ गते बुधबार
असार २३, २०७८ ०६:५६ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल आषाढ २३ गते बुधबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ जुलाई ७ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यउत्तरायण, ग्रीष्मऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढकृष्णपक्षको त्रयोदशी तिथि रात्रि २ः५५ बजेसम्म, त्यसपछि चतुर्दशी रहनेछ ।
मेष – सामान्य कार्यलाई धेरै समय खर्चनु पर्दा दिक्क लाग्नेछ । स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला । धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । अचल वस्तुमा गरेको लगानिबाट दीर्घकालिन रुपमा लाभ मिल्नेछ । हतारमा निर्णय नलिनुहोला ।
वृष – आत्मिय व्यक्तिसँगको रमाइलो भेट हुनेछ । महत्वपूर्ण कार्यको जिम्मेवारी पाइनेछ । काम गर्ने कलाको प्रशंसा मिल्नेछ । हितैसि व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने मौका मिल्नेछ । ठूला व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ ।
मिथुन – ठूलो लगानि एवं टाढाको यात्रा शुभ देखिन्न । व्यर्थको झन्झट मात्र व्यहोर्नु पर्नेछ । अनावश्यक कार्यमा चासो रहनेछ । गलत व्यक्तिको परिबन्दमा परिन सक्छ, अरुको लहैलहैमा नलाग्नुहोला ।
कर्कट – आय स्थानमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले आकस्मिक धन लाभ एवं मानसम्मान मिल्नेछ । थोरै मिहिनेतले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । खुसियाली छाउनेछ । कार्य प्रतिको लगनशिलता र क्रियाशिलता बढ्नेछ ।
सिंह – स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ भने नयाँ संझौता समेत गरिनेछ । गरेका कार्य प्रभावशाली बन्नेछन् भने समर्थकहरु पनि बढ्नेछन् । अध्ययन अध्यानपन क्षेत्रमा विशेष चासो रहनेछ । सकारात्मक चिन्तन रहनेछ ।
कन्या – अवसर हुँदाहुँदै पनि ढिला सुस्तिका कारण मौका फुत्कनेछ । मान्यजनसँग विवाद पर्नेछ । धार्मिक कार्यमा भने आस्था जाग्नेछ । पढाइमा अघिल्ला दिनमा भन्दा केही प्रगति हुनेछ । मिश्रीत फलदायी समय रहेको छ ।
तुला – स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । अपरिचित व्यक्तिलाई गोपनियता बताउँदा बन्नै आँटेका कार्यमा समेत बाधा अड्चन आउनेछन् । नियम आचरणमा रहन गाह्रो पर्नेछ । नयाँ संझौता एवं टाढाको यात्रा समेत नगर्नुहोला ।
बृश्चिक – पारिवारिक समस्या हल भएर जानेछ । उमंग छाउनेछ । आत्मियजनसँगको रमाइलो जमघट एवं यात्रा होला । सामान्य प्रयासबाट नै कार्य बन्दा हौसला थपिनेछ । दाम्पत्य सहयोगले कार्य बन्नेछन् ।
धनु – मिहिनेती प्रबृत्तिको विकास हुनेछ । शत्रूहरु कमजोर बन्नेछन् । केही कठिनाइ भोग्नु परेता पनि मिहिनेतको भने कदर हुनेछ । मन, बचन र कर्मको तालमेल मिल्नेछ । परिश्रमको सही प्रतिफल पाइनेछ ।
मकर – शारीरिक आलस्यता र पारिवारिक असमझदारीताले दैनिक कार्यमा समेत समस्या आउनेछ । सहज वातावरण बन्दा–बन्दै पनि मन भित्र डर त्रासले छाड्ने छैन । पूर्व तयारी र योजना बनाएर कार्यमा निस्नु उचित हुनेछ ।
कुम्भ – सहज तवरले बन्दै आएका कार्यमा समेत बाधा व्यवधान आउनेछ । मानसिक चिन्ताले छाड्ने छैन । नयाँ कामको थालनि गर्दा अन्योलता रहनेछ । आर्थिक अभाव हुनेछ । मातृ पक्षको सल्लाहमा कार्य गर्नुहोला ।
मीन – खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ । सहोदरका व्यक्तिसँग नयाँ ठाउँ घुमफिर गर्ने अवसर मिल्नेछ । सहयोगीहरुको साथले गर्दा समस्याको समाधान हुनेछ भने नयाँ कार्यको आरम्भ गरिनेछ । सांगीतिक क्षेत्रमा मन रमाउनेछ ।